अन्तरवार्ता Archives - Page4of 17 - Purbeli News
कुम्भ मेलाबाट नेपाली बिचकाे एकता र धार्मिक सद्भाव बढेर जान्छ : जगद्गुरु बालसन्त
सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका स्थित प्राचीन हरिद्धार चतराधाम कुम्भ नगरीमा दोस्रो पिण्डेश्वर अर्द्व महाकुम्भ महोत्सव भव्य रुपमा सञ्चालन भै रहेकाे छ । देश विदेशका गरि एक करोड भन्दा बढी धार्मिक भक्तजनको सहभागिता रहने अर्द्व कुम्भमेला आयोजक समिती रहेको धार्मीक मेला चैत्र २३ देखि बैशाख २४ गते एक महिना सम्मका लागि सञ्चालन भएको हाे । यस पटकको अर्द्व ...
ईटहरी । प्रदेश १ मा ब्यबसायी भीम पौडेल कुनै नौलो नाम होईन । बेलाबेला उनको चर्चा परिचर्चा भई नै रहन्छ । पछिल्लो समय ईटहरी उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा सँगै उनको चर्चा शुरु भएको छ । करिब ३ दशक अघि तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट ब्यबसाय शुरु गरेका उनको ब्यबसाय यतिबेला प्रदेश १ भरि बिस्तार भईसकेको छ । उनका दर्जनौ ब्यापार ब्यबसाय यतिबेला...
यसकारण पनि अन्य स्कुल भन्दा सुष्मा सेकेण्डरी अब्बल छ : रेश्मा रायामाझी
सोमबार, बैशाख ०२, २०७६
सुनसरीको इटहरी– ८ स्थित पुष्पलालचोक नजिक रहेको सुष्मा सेकेण्डरी स्कुल आर्कषक भौतिक संरचनाका साथै शान्त वातावरणका साथमा अघि बढेको छ । समयको माग अनुसार गुणस्तरीय, व्यवहारीक र भयरहित शिक्षाका लागि यस स्कुल पछिल्लो समय अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाई बन्न थालेको छ । समय अनुकुल अंग्रेजी भाषालाई बढी जोड दिइएको यस स्कुल शिक्षासवी तथा केही सामाजिक व्यक्ति...
गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाईमा नयाँपन नै बेवीलोनकाे बिशेषता हाे : बिनाेद थपलिया
ईटहरी । सुनसरीको इटहरी–५ स्थित हलगडामा रहेको बेवीलोन सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कुल पछिल्लो समय धेरै अभिभावक र बिद्यार्थीको रोजाईको बिध्यालय बन्न थालेको छ । अबको शिक्षा व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र समयसापेक्ष हुनु पर्ने र अंग्रेजी भाषालाई बढी जोड दिइरहेको स्कुलमा भाैतिक सजाय काे सट्टामा रचनात्मत तरिकाले कार्य गर्न सिकाउदे अाइरहेकाे छ । शिक्षीत युवाहरूको जोस र...
यस कारण धरानमा बिद्यार्थीको पहिलो रोजाई बन्दै टप युनिभर्सल एकेडेमी : प्रकाश लकान्द्री
धरान । सुनसरीको धरानमा अबस्थित टप युनिभर्सल एकेडेमी शैक्षिक परामर्श लिन र बिभिन्न कोर्षहरु अध्यायन गर्न चहाने बिद्यार्थीहरुका लागी कोशेढुंगा सावित भएको छ । एक दशक अघिदेखि सञ्चालित सो एकेडेमीले एसइई दिएर बसेका बिद्यार्थीहरुलाई बिज्र कोर्ष लगायत शैक्षिक परामर्श समेत प्रदान गरिरहेको छ । एकेडेमीले निरन्तर उच्चस्तरीय परामर्श लगायत अभिभावकहरुको रोजाईल...
पाथीभरामा गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाईमा नयाँपन दिईएको छ : गोपाल श्रेष्ठ
ईटहरी । सुनसरीको ईटहरीमा रहेको पाथिभरा सेकेण्डरी स्कुल पछिल्लो समय धेरै अभिभावक र बिद्यार्थीको रोजाईको बिद्यालय बन्न थालेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाईमा नयाँपन प्रयोग भएपछि सो बिद्यालय आकर्षणको केन्द्र बनेको हो । बिद्यालयको समग्र बिषयमा बिद्यालयका प्रिन्सिपल गोपाल श्रेष्ठ सँगको भिडियो कुराकानी :
शिक्षासेवी टीकाराम ढकालकाे जन्म वि.स. २०२८ सालमा भाेजपुर जिल्लाकाे याकुमा भएको हाे । २०४८ सालमा स्थापना भएर संचालन हुदै आएकाे माेरङकाे सलकपुरमा रहेकाे ब्राइट फ्युचर मा. वि.का प्रिन्सिपल ढकालले २०५६ साल देखि विधालयकाे नेतुत्व गर्दै आएका छन् । शिक्षा र प्याब्सनकाे गतिविधिमा लामाे समयदेखि सक्रिय रहदै आएका ढकालले हरैचा स्थित जनता मा.वि. बाट २०४५ सालमा ...
देशमा महँगी, भ्रष्टाचार र कर आतङ्क बढ्याे : नेता रमेशजंघ रायमाझी
सोमबार, चैत्र २५, २०७५
राजनीतिकर्मी तथा समाजसेवी रमेशजंघ रायमाझीकाे जन्म विगत ५ दशक अघि भाेजपुर जिल्लामा पिता स्व. निलकुमार तथा माता विष्णुकुमारी रायमाझीबाट भएको हाे । उनि नेपाली कांग्रेसकाे राजनीतिमा विधार्थी जीवनकाे २०३२ साल देखि क्रियाशिल रहदै गाउँ नगर देखि केन्द्रीय स्तर सम्म अाफनाे परिचय स्थापित गर्न सफल भएका छन । राजनीतिमा विभिन्न अाराेह अवराेहका साथै संघर्ष खेप्दै...
विज्ञान र प्रविधिको युगमा इतिहास र पौराणिक विषयमात्र अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले कसरी विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? शिशिर सिंखडा
शिशिर सिंखडा, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि सक्रिय युवा हुन् । क्याम्ब्रिज इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक निर्देशक सिंखडा झापाबाट सुरु भएको क्याम्ब्रिजलाई अष्ट्रेलियासम्म पुर्याउन जोडतोडले लागेका छन् । पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अ...
प्रचण्डको बिरोध गर्नु बेकार छ, नेपालमा प्रचण्ड जत्तिको दुरदर्शी र डाईनामिक नेता जन्मिएकै छैन : दुर्गाप्रसाद प्रसाँई
झापाको बिर्तामोडमा रहेको बि.एण्ड सी टिचिङ हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक हुन दुर्गाप्रसाद प्रसाई,बेलाबेलामा चर्चा र आलोचनाको शिकार हुने गरेका उनी ब्यत्तिगत रुपमा निडर र हक्की स्वभावका रहेका छन । कुनैपनि काम शुरु गरेपछि त्यसलाई सफल बनाएर मात्र छोडने स्वभावका उनी आफनो कामबाट आत्तिएकाहरु आफ्नो आलोचनामा रमाउने गरेको बताउँछन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाक...